ज्वरोले थलियो लुम्बिनी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
ज्वरोले थलियो लुम्बिनी
नमुना जाँच गरेका स्थानमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा दिनहुँ ५० जनासम्म र कपिलवस्तुको तौलिहवा जिल्ला अस्पतालमा ६० जनासम्ममा भाइरलका बिरामी
श्रावण १२, २०७८ सन्जु पौडेल, मनोज पौडेल, दुर्गालाल केसी, माधव अर्याल
लुम्बिनी, कपिलवस्तु,दाङ, पाल्पा — रूपन्देहीको ओमसतिया–२ की दयालक्ष्मी शर्मालाई साउन ८ को साँझबाट ज्वरो आयो । दिनभरिको थकानले होला भन्ने सोचिन् । रातभरि ज्वरो नघटेपछि बिहान परिवारका सदस्यले भैरहवास्थित एक अस्पताल पुर्‍याए । रगत जाँचपछि चिकित्सकले भाइरल इन्फेक्सन भएको बताए । ‘औषधि लिएर फर्कियौं,’ छोरा प्रतीकले भने, ‘घर ल्याएपछि साँझ झनै च्याप्यो र बान्तासमेत भयो ।’
पाल्पाको रामपुर अस्पतालमा आइतबार उपचारका लागि पालो पर्खंदै । असार अन्तिमसातादेखि भाइरल ज्वरो, रुघाखोकीका बिरामी बढेका छन् । तस्बिर : माधव अर्याल/कान्तिपुर
निको हुने छाँट नदेखिएपछि शर्मालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ । यतिबेला परिवारका अन्य सदस्यमा पनि उनको जस्तै लक्षण देखिन सुरु भएको छ । बुटवल–१२ का पृथ्वी पाण्डेले आफूलाई चार दिनदेखि ज्वरो र रुघाले सताएको छ । अस्पताल जान कोरोना संक्रमणको डर भएकाले मेडिकलबाट औषधि ल्याएर खाइरहेका छन् । ‘अब पनि निको नभए अस्पताल जान्छु,’ उनले भने । आफूभन्दा पहिला आमा र भाउजूलाई समेत ज्वरो आएर निको भएकाले औषधि सेवन गरिरहेको उनले बताए ।
केही दिनयता ज्वरोका बिरामीको चाप बढ्न थालेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सिनियर फिजिसियन कन्सल्टेन्ट डा. सुदर्शन थापाले बताए । दिनमा ५० जनासम्म भाइरलका बिरामी अस्पताल आइरहेका छन् । ‘कोरोनाका बिरामी आउने क्रम बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि भाइरल थपिएर झन् खतरा भो ।’ उनका अनुसार भाइरल र कोरोनामा गन्ध र स्वाद हराउनेबाहेकका सबै लक्षण मिल्ने भएकाले सतर्कता अत्यन्तै जरुरी रहेको छ । भाइरलको लक्षण देखिएका बिरामीले एक पटक पीसीआर जाँच गराउनु राम्रो हुने उनले बताए । भाइरल सरुवा रोग भएकाले कोरोनामा अपनाइने सबै सतर्कता यसमा समेत अपनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । रुघा लागेका र ज्वरो आएका मानिस मेडिकलको भर नपरी अस्पतालमै जाँच गराउन जानुपर्ने डा. थापाले बताए ।
कोरोनाकै उपचार गरिरहेका बेला भाइरलको सुरुवातले अस्पतालमा भीडभाड बढ्न थालेको भीम अस्पताल भैरहवाका सूचना अधिकारी डा. सिद्धार्थ पाण्डेले बताए । उनले कोरोनाका नयाँ बिरामी र भाइरल इन्फेक्सन भएका बिरामी दिनहुँ बढ्दै गइरहेको बताए । ‘यो भाइरल सिटामोलले निको हुने खालको छैन,’ उनले भने, ‘अस्पतालका धेरै स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत भर्ना गरेरै उपचार गर्नुपरेको छ ।’ उनले केही दिनदेखि समूहगत नै बिरामी हुने बढेको भन्दै यसले कोरोना र सामान्य निको हुने ज्वरो भनी छुट्याउन समस्या भइरहेको बताए । डा. पाण्डेले भाइरल भएका मानिस अलमलमा परी घरमै बसे वा सामान्य औषधि खाएर निको नभई झन् स्थिति बिग्रन सक्ने जनाए । भाइरल भएका बिरामीले झोलिलो खानेकुरा, गेडागुडी, प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खान र चिसो कुरा नखान उनले सुझाव दिए ।
कपिलवस्तुमा पनि ज्वरोका बिरामी बढेका छन् । ज्वरो आउने र रुघाखोकी लागेर शरीर गलाउने हुँदा बिरामीहरू आत्तिँदै अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । सदरमुकाम तौलिहवा जिल्ला अस्पतालमा दिनहुँ ६० जनासम्म भाइरल फिभरका बिरामी आउने गरेको चिकित्सकले बताए । सामान्य अवस्थामा दैनिक डेढ सय बिरामी आउने गरेकामा अहिले बढेर दुई सयको हाराहारीमा पुगेका छन् । १५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा फिभर बढी देखिएको अस्पतालका मेडिकल अधिकृत डा. गणेश क्षत्रीले बताए । ‘भाइरल फिभर पनि एउटा रोग नै हो,’ उनले भने, ‘किन यसरी एक्कासि बढ्यो भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ तर, बिरामी अप्ठ्यारो भएर आए पनि जटिलता अझै नआएको उनले बताए ।
बिरामीसँग परामर्श र सल्लाह गरेर सामान्यदेखि एन्टिबायोटिक औषधि चलाउने गरेको उनले बताए । सात दस दिनदेखि बिरामी बढेका छन् । तर, फोक्सोमा असर गरेका बिरामी भने आएका छैनन् । पोस्ट कोभिडको प्रभाव, निषेधाज्ञा खुलेपछि आवागमनमा वृद्धि र मौसम परिवर्तनका कारण यस्तो समस्या आएको हुन सक्ने डा. क्षत्रीले बताए । भाइरल फिभर भएर आएका बिरामीको पीसीआर परीक्षण गर्दा कोभिड नदेखिएको उनले बताए ।
कोरोना महामारीको जोखिमसँगै दाङमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्न थालेपछि उपचारमा समस्या हुन थालेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै मानिसको लापरबाही बढेको छ । बजारमा मास्क लगाउने र स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्नेको संख्या निकै कम छ । अहिले भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्दै गएको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख अंगदबहादुर शाहीले बताए । ‘अहिले मास्क प्रयोग गर्नेको संख्या घटेको छ,’ उनले भने, ‘लापरबाही बढेकै कारण बिरामी पनि थपिँदै गएका छन् ।’
दिनदिनै भाइरल ज्वरोका बिरामी आइरहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका मेडिकल सुपेरिन्टेन्डेन्ट डा. विनोद सिंहले बताए । ‘दिनदिनै भाइरल ज्वरोका बिरामी आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘दिनहुँ दुई/तीन जना आउँछन् ।’ भाइरल ज्वरोका बिरामी बढिरहेको राप्ती गाउँपालिकास्थित अस्पतालका प्रमुख डा. पुष्प भुसालले बताए । उनले भने, ‘यो मौसमअनुसार दिनदिनै बिरामी थपिँदै गएका छन् । मानिसहरूमा स्वास्थ्य सावधानी घटेकाले रोग झनै फैलने जोखिम छ ।’
कोरोनासित मेल खाने लक्षण भएका बिरामी बढे पनि पाल्पामा परीक्षण ह्वात्तै घटाइएको छ । नमुना जाँच गरेका स्थानमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । रामपुर, निस्दी, बगनासकालीबाहेक अन्य स्थानीय तहले दुई सातायता जाँच नै गरेका छैनन् । सात स्थानीय तहले १५ दिनयता परीक्षण गर्न रोकेका छन् । केही दिन पाल्पा अस्पताल कोभिड परीक्षण प्रयोगशालामा समेत किट अभावले जाँच हुन सकेन ।
‘असारको अन्तिम साता र साउनको पहिलो साता खोपका कारण खासै जाँच गर्न सकिएन,’ तानसेन नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक चन्द्रतारा बस्यालले भने, ‘अब प्लान गरेको हो तर फेरि खोप आउने भन्ने छ । खोपले गर्दा जाँच गर्न नै पाइएको छैन ।’ उनका अनुसार असारमा भन्दा साउन लागेपछि अझ बढी कोरोना संक्रमण बढेको छ । लक्षणसहितका बिरामीले सम्पर्क गरे भने पाल्पा अस्पताल कोभिड परीक्षण प्रयोगशालामा सिफारिस गरेर पठाउने गरेको उनले बताए ।
तानसेन बजार क्षेत्रमा पनि अहिले संक्रमण बढेको छ । भुसालडाँडा, बराङ्दी, कैलाशनगरलगायत स्थानबाट फोन आइरहेको तानसेन नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक बस्यालले बताए । ‘हामीलाई पनि संक्रमण बढेको महसुस भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जनशक्ति कमी भएपछि जाँच गर्न सकिएको छैन ।’ ज्वरो आउने, रुघाखोकी लाग्ने, भाइरल भयो भन्दै मेडिकलबाट औषधि खानेको संख्या पनि बढेको छ । तानसेन र ग्रामीण बजारका मेडिकलमा त्यस्ता बिरामी बढेका छन् ।
रामपुर अस्पतालमा १० बेडको आइसोलेसन भरिभराउ छ । अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. विजय परियारका अनुसार अस्पतालमा दैनिक जाँच भइरहेको छ । बिरामीको संख्या बढेको बढ्यै छ । ‘पछिल्ला केही दिनयता बिरामीको संख्या बढेको छ,’ उनले भने, ‘भर्ना हुनेको संख्या पनि बढेको छ ।’
प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ ०७:३२
कर्णाली करिडोर अवरुद्ध : यात्रुलाई सास्ती, पहिरो पन्छाउन छैन पैसा
करिडोरका रेगिंल, फुगाड, लाफा, बाजुराको रातालगायत ठाउँमा पहिरो खसेको छ भने दर्जनौं ठाउँमा हिलोले गाडी चल्ने अवस्था छैन
श्रावण १२, २०७८ तुलाराम पाण्डे
काठमाडौँ — हस्तान्तरण भएको दुई साता नपुग्दै कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको खुलालु–लैफु–सल्लीसल्ला सडक अवरुद्ध भएको छ । वर्षाले करिडोरका ठाउँठाउँमा पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध बनेको हो । कालीकोटको खुलालुदेखि सल्लीसल्लासम्मको १ सय २२ किमि सडक नेपाली सेनाले निर्माण सकेर गत असार ३१ मा सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
कर्णाली करिडोरअन्तर्गत कालीकोटको जितेबाट गाडी नचलेपछि पैदल हिँड्दै स्थानीय । तस्बिर : तुलाराम/कान्तिपुर
ठाउँठाउँमा पहिरो खस्दा र गत वर्षको वर्षामा बाढीले बगाएको फुगाडखोलाको बेलिब्रिज निर्माण नहुँदा सडक अवरुद्ध भएको हो । सडकको पहिरो पन्छाउने काम नेपाली सेनाले गर्ने लिखित सहमति भए बजेट नहुँदा समस्या भएको निर्माण कार्यदल प्रमुख मिलन कार्कीले जानकारी दिए । ‘फुगाडमा खोला बढेकाले साना गाडी तर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अरू ठाउँको पहिरो हटाउन पनि पैसाको सुनिश्चितता नभएकाले काम अघि बढेको छैन ।’
कालीकोटको अँधेरीखोलादेखि भुराबगरसम्म फुकोट जलविद्युत् आयोजनाका कारण पनि पहिरो खसेको सडक निर्माण कार्यदलले जानकारी दिएको छ । वर्षाले करिडोर अवरुद्ध भएपछि स्थानीयलाई सास्ती भएको छ । बिरामीलाई काँधमा बोकेर अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता भएको पलाता–१ पुलाहाका खडक भण्डारीले बताए । ‘वर्षाले सडकको बिजोग छ,’ उनले भने, ‘वर्षा नसकिएसम्म गाडी चढ्न पाइएला जस्तो छैन ।’ घरबाट दुई दिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम मान्म पुगेको उनको गुनासो छ । कर्णाली करिडोर अवरुद्ध हुँदा थिर्पुबाट पैदल हिँडेर मान्म आएको पलाता गाउँपालिकाका कर्मचारी बिअराज बमले बताए । कर्णाली करिडोरका रेगिंल, फुगाड, लाफा, बाजुराको रातालगायत ठाउँमा पहिरो खसेको छ भने दर्जनौं ठाउँमा हिलोले गाडी चल्ने अवस्था छैन ।
सरकारले २०७१ चैतमा कर्णाली करिडोरको खुलालु–लैफु सल्लीसल्ला सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । कडा चट्टान भएकाले नेपाली सेनाले सात ठाउँमा सैनिक क्याम्प राखी सात वर्षमा सडक निर्माण सकेको थियो । सबै कागजात सडक विभागलाई बुझाइसकेको प्रमुख सेनानी कार्कीले जानकारी दिए । कालीकोटको फुगाड, हुम्लाको सल्लीसल्लालगायत ५ वटा खोलामा बेलिब्रिज बनाउन विभागसँग स्वीकृति लिने काम भइरहेको छ । छिट्टै टेन्डर निकालेर बेलिब्रिज बनाइने उनले बताए ।
सेनाले जिम्मा लिएको १ सय २२ किमि सडक खन्न १ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । खुलालुदेखि हिल्सासम्म २ सय ८१ किमि लम्बाइ रहेको करिडोरको कालीकोटमा ४०, बाजुरामा ४४ र हुम्लाको कुवाडी खोलाखेखि सल्लीसल्लासम्म ३९ किलोमिटर सडक पर्छ । अहिले खुलालुसम्म कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला सडक जोडिएको छ । सल्लीसल्लाभन्दा माथि १२ किमि दुलीकुनासम्म सडक विभागले ट्र्याक खोलेको थियो । अहिले करिडोरको केही खण्डमा जिप चले पनि ठूलो पानी परेको बेला समस्या भएको यातायात व्यवसायी अमरबहादुर बुढाले गुनासो गरे ।
बनेन कर्णालीमा पुल
कर्णाली राजमार्गबाट कर्णाली करिडोर जोड्न कालीकोटको खुलालुस्थित कर्णाली नदीमा थालिएको पुल निर्माण अझै सकिएको छैन । कर्णाली राजमार्गसँग कालीकोटका पाँच स्थानीय तहसहित बाजुरा, मुगु र हुम्ला जोड्ने सडकमा पुल नबन्दा यात्रु सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।
खुलालुस्थित कर्णाली नदीमा पक्की पुल निर्माणको ठेक्का २०६९ सालमा भएको हो । दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी कन्काई जेभीले ठेक्का लिए पनि पाँच वर्षसम्म सम्पन्न भएको छैन । सुरुमा १३ करोड रुपैयाँ लागत बढेर १५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कन्काई जेभीले अर्को ठेकेदारलाई निर्माण जिम्मा दिएपछि विभागले कारबाही थालेको थियो । तर ठेकेदारको अनुरोधपछि पुनः सम्झौता गरेर गत वर्षबाट काम अघि बढाइएको हो । कोरोना महामारीका कारण पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीले बताए । स्टिल टससहितको ७५ मिटर लम्बाइको पुल बनाउने काम जारी छ ।
प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ ०७:२९